MSF OO DAWEYSEY DHIBANAYAASHII DAGAALKA BARTAMAHA SOOMAALIYA - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
Dhaawacyadii dagaalka oo lagu daweeyey cusbitaalka MSF ay ku leedahay magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud.
Dhaawacyadii dagaalka oo lagu daweeyey cusbitaalka MSF ay ku leedahay magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud. Dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn/Medecins Sans Frontieres (MSF) ayaa daweeyey dersinno bukaanno ku dhaawacmey dagaallada ah ka dib dagaalkii Jimcihii ka dhacay magaalada Wabxo ee Bartamaha Soomaaliya.Bukaannada ayaa habeenkii Jimciha yimid Cusbitaalka Istarliin ee 80ka sariir leh ee ay MSF ku maamusho magaalada Guriceel oo qiyaastii 60 km waqooyiga bari ka xigta halka ay iskahorimaadyadu ka dhaceen – oo ka tirsan gobolka Galgaduud.
Ka dib markii ay shaqaalihii caafimaadka ee shaqada ku jirey ay kala saarsaareen, ayaa toddoba bukaan loo aqoonsaday in ay u baahan yihiin qalliin degdeg ah, lixna waxaa lagu daaweeyey waaxda bukaan-socodka islamarkiina waa la fasaxay, halka kuwii harey la dhigey cusbitaalka si looga daweeyo jajab iyo dhaawacyo kale oo aan nafta halis gelineynin.
Si uu cusbitaalku wax uga qabto tirada badan ee bukaannada ku soo qulqulaya, cusbitaalka oo horeba sariiro yari ay ka bannaanaayeen markii ay jadeeco halkaasi ka dillaacay, ayaa waxaa loo yeerey shaqaale dheeri ah waxaana la abuurey meelo cusub oo la dhigo sariiro iyada oo la banneeyey qolalkii hawl-kaabidda iyo weliba qolalka qolalka hortooda. Sabtidii ayaa lagu wareegey qaybaha cusbitaalka oo dhan si loo hubiyo in dhammaan bukaannadii guryahooda aadi karey la diro.
MSF wax ay daaweyn caafimaad oo lacag la’aan ah ka bixisaa sagaal gobol oo ku yaalla Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya. Ururku waxa uu cusbitaalka Guriceel (Istarliin) ee ku yaalla gobolka Galgaduud ka shaqeynayey ilaa 2006dii.
MSF waxa ay sidoo kale maamushaa laba rug caafimaad oo degaanka ku yaalla: mid ku taalla Dhuusa-Mareeb, oo ah magaalo-madaxda gobolka Galgaduud, iyo mid ku taalla Xiindheer.
Sanadkii 2008da, waxaa 63,425 la-talin caafimaad ah lagu bixiyey waaxda bukaan-socodka ee cusbitaalka iyo rugaha caafimaadka, daaweyn lacag la’aan ah ayaana la siiyey dhammaan bukaannadii u baahnaa. Ku dhowaad 4,000 oo qof ayaana la dhigey cusbitaalka.
Ololihii jadeecada oo daahay
Ilaa bilowgii bisha Maajo, MSF waxa ay in ka badan 104 xaaladood oo jadeeco ah ku daweysay Cusbitaalka Istarliin waxaana shaqaalaha waaxda bukaan-socodka isu diyaarinayeen olole tallaalka jadeecada ah oo ay degaanka ka fuliyaan.
Diyaar-garowga waxaa ku jirey booqashooyin lagu tegey tiro tuulooyin ah, oo qaarkood ay 54 km ka baxsanaayeen magaalada Guriceel, si loo raadiyo xaalado cudurka ah oo cusub iyo si tuula-joogga loo ogeysiiyo ololaha tallaalka ee bilaabanaya toddobaadyada soo socda.
Haseyeeshee, shaqaalaha tababaran oo yar daraaddeed, kaalkaaliyeyaashii iyo kaalkaaliye kaabayaashii u qaabilsanaaa waxqabadyada jadeecada ayaa dib loogu xilsaarey in ay daryeelaan dhaawaca cusbitaalka yaalla. Markaana waxqabadyadii loogu baxayey cusbitaalka dibaddiisa ayaa la hakiyey waxaana kaalkaaliyeyaashii iyo kaalkaaliye kaabayaashii ay ku jiraan heegan.
MSF waxa ay waxqabadyada jadeecada dib u bilaabi doontaa maalmaha soo socda.
Tags: dhaawac, guriceel, Istarliin